Mucjisooyinka Ku Lammaan Qoraalka Ku Xardhan Qorigii Lagu Xasuuqay Muslimiinta New Zealand. – Xeernews24
Mucjisooyinka Ku Lammaan Qoraalka Ku Xardhan Qorigii Lagu Xasuuqay Muslimiinta New Zealand.
17. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Brenton Tarrant, oo 28 jir ah una dhashay Australia waa ninkii shalay 50-ka qof ee Muslimiinta ah ku xasuuqay magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. Marka laga tago dhibaatada uu xasuuqaasi gaystay waxa xusid mudan oo Dad badani ay is waydiinayaan qoriga darandooriga u dhaca ee uu ninkani ku laayay dadkan Masaajidka ku cibaadaysanayay salaadda Jimce kaasi oo uu dhinac walba kaga qoray qoraallo lagu xardhay far cad oo qayb kasta oo qoraalkaasi ka mid ahi ka turjumayo ama ama ay leedahay macno gun dheer oo layaab leh.
Qoraallada qaarkood waa taariikh islaam nacayb muujinaysa halka kuwo kalena yihiin hanjabaado iyo hadallo uu isku dhiirri galinayo isaga oo isu dhigaya nin gudanaya waajib diini ah mid waddaniyeed iyo mid islaam soo galooti nacayb ah.
Qaybta ugu horraysa qoriga ama dhuunta qoriga waxa kaga qoran magaca CHARLES MARTEL.
CHARLES MARTEL waa nin ay dadka reer Galbeedka ahi u yaqaanaan Geesi in badan ka guulaystay Muslimiinta marka laga hadlayo taariikhda dagaal ee u soo dhaxaysay. CHARLES MARTEL waa Taliyihii hogaaminayay ciidamada Franklin ee ka guulaystay Ciidamadii Muslimiinta dagaalkii Bilaad Al Shuhadaa.
warbixintan oo Wargeyska Foore idiin soo turjumay waxa ay intaasi ku daraysaa in Qaybta xigta ee qoriga waxa ku qoran “QAXOOTIYOHOW KU SOO DHAWAADA CADAABTA JAHANNAMA”. Waxa uu qaybtan ugu hanjabayaa dadka soo galootiga ah ee ku sugan gaar ahaan dalalka Australia iyo New Zeland oo ay u badan yihiin dadka Muslimiinta ah ee dalalkaasi u tacabiray.
Qaybta Dhexe ee Qoriga waxa uu ku qoray magaca ISKANDER. Ninkan Iskandar waa Hogaamiyihii reer Albania ee Mucaaridka ku ahaa kana hor tagay ee la dagaalamay Dawladdii Cusmaaniyiinta ee Islaamka ahayd.
Waxa kale oo qoraallada ku xardhan qorigan ka mid ah magaca MARCO ANTONIO BRAGADINO oo ah Hogaamiyihii ALFENISI oo ahaa ninkii isagu diiday heshiiskii FAMAGOSTA kaasi oo laayay qoysas badan oo Turki ah.
Qoraal kale waxa uu u dhigan yahay sidan “ALEKSANDAR NISSONETTE” magaca ninkaasii waa ninkii Lixda qof ku laayay Masaajid ku yaalla waddanka Kanada sannadki 2017. Waxaanu u uga dhigan yahay nin geesi ah oo gutay muhiimad la mid ah tan uu shalay dadka ku laayay. Waxaanad mooddaa in ay yihiin rag isku xidhnaa oo wada socday ama mabaadi’doodu meel ku wada aroorto.
Ugu dambayn qaybta dambe ee qorigan uu Brenton Tarrant dadka masajidka ku sugnaa ku xasuuqay waxa uu ku qoray magaca “ANTON LUNDIN PETTERSON” ninkani waa ninkii hore waddanka Sweden ugu laayay caruurta Muhaajiriinta ah.
Isku soo duuboo Brenton Tarrant waxa uu farriimahan micnaha badan xambaarsan ku qoray qorigii uu shalay xasuuqa ku gaystay waana farriimo muujinaya heerka mabaadii’da kooxaha garabka midig ee asal raaca ahi gaadhsiisan yahay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/dd-2.jpg 211 400 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-17 01:41:132019-03-17 01:42:44Mucjisooyinka Ku Lammaan Qoraalka Ku Xardhan Qorigii Lagu Xasuuqay Muslimiinta New Zealand.
Shirarka Jigjiiga iyo Silica Sitti ka socda waa Gaf iyo kala dheeri Ereyadii uu qorigiisa ku dul xardhay ninkii muslimiinta ku dhex xasuuqay masjidka...